Isifundo samalanga onke sama-Mandarin: "Uthando" ngesiTshayina
Indlela Yokuthetha Nokubhala "Uthando" eMandarin
Uthando luyinxalenye ebalulekileyo yobomi, mhlawumbi kubaluleke kakhulu! Ukubonisa uthando ngolwimi lwangaphandle kunokuba nzima kwaye kufuneke ukuqonda kakuhle ulwimi , kodwa ukususela kwilizwi luthando ngokwalo luyinto efanelekileyo.
Umntu waseTshayina othi "uthando" okanye "ukuthanda" yi-Love in Chinese yesiShayina, kodwa ingabhalwa njenge-爱 kwiShayina elula. I-Chinese yesiShayina isetyenziswa kakhulu eTaiwan naseHong Kong, kanti i-Chinese esilulayo isetyenziswa kwilizwe laseKinland.
Uhlobo oluphambili phakathi kwabalinganiswa ababini kukuba i-version elula ingenayo icandelo, 心. NgesiTshayina, 心 (xīn) lithetha "intliziyo." Ngaloo ndlela, i-joke esebenzayo phakathi kwabameli baseTshayina kukuba akukho "uthando" kwiindawo ezisetyenziselwa ukusebenzisa isiTshayina ngenxa yokuba umlinganiswa uyasuswa intliziyo yakhe.
I-love / 爱 ingasetyenziswa njengegama okanye isenzi-ukuthanda umntu okanye ukuthanda ukwenza into ethile. Umlingiswa usetyenziswa ngokufanayo ngendlela efana neyomdlalo waseTshayina 喜欢, oku kuthetha "ukuthanda" okanye "ukuthanda."
I-pinyin ye-愛 / 爱 i "toi." Umlingiswa ubizwa ngezwi le-4, kwaye unokuthi uhanjiswe njengo-ai4.
Imizekelo yezivakalisi usebenzisa i-Ài
Leli bali luthando.
Funda iFrench Word Le Sillage
Ithini Ingxaki EmaJapan?
Ngaba kufuneka usebenzise 'le-e-mail' nge 'imeyile'?
Indlela yokusebenzisa "Yi-Que" ukubuza imibuzo ngesiFrentshi
Funda imigomo yezemidlalo ngesiJamani
Iinkcubeko ezahlukeneyo zobugqirha
Kuthetha ukuthini xa kukho uhlobo oluthile olwenziweyo
Abahlanu beDancing Deities kwi-Mythology
"UNoel wokuqala" iiChords & Lyrics
Funda ukuhlukana phakathi kwe "Sein" kunye noHaben ngesiJamani
Yintoni egameni elifanelekileyo?
Imfazwe Yehlabathi 1: Isixa esifutshane 1919-20
Yintoni uTheodore Roosevelt athi Ngabangaphandle